Psychology nke mmekọrịta nne na nwa ya nwoke
Site n'oge a mụrụ ya, a na-enwe njikọ mmekọrịta uche siri ike n'etiti nne na nwa ahụ. Ọ bụ ya mere mkparịta ụka nke nne na nna na nwa ya ji dị oke mkpa. Ọ dịwo anya a gosipụtara na ọ bụrụ na nne anaghị akwụ ụgwọ nwa ya, o nwere ike ọ gaghị enwe ike ikwurịta okwu ruo ogologo oge, nwee obi egwu, ma mesịa me too ghọọ onye dị mgbagwoju anya na onye nwere iwe. Otú ọ dị, na nkà mmụta uche nke mmekọrịta dị n'etiti nne na nwa, enwere ọtụtụ nuances.
Karịsịa ma ọ bụrụ na nne m na-azụ nwata naanị ya. Ya mere, nne ga-ejikọta uche na uche, inwe ike ọ bụghị nanị inye otuto, ma na-ata nwa ahụ ahụhụ, ma na-achọta mgbe niile obi ụtọ n'etiti ala. E kwuwerị, maka nwa m, ọ dị ezigbo mkpa na site na nwata, nne m ghọtara na ọ bụ nwoke n'ọdịnihu. Ya mere, na mmekọrịta ya na nwa ya nwoke, ọtụtụ ụzọ na-adaba maka ịzụ nwa nwanyị agaghị enwe ike iji ya mee ihe. Dịka ọmụmaatụ, ndị nne na-echegbu onwe ha na ndị na-arụsi ọrụ ike na-egbochi mmepe nke uche, na-enye ntaramahụhụ, na-emerụ nwa ahụ, na otu omume ahụ. N'ihi ya, ụmụ dị otú ahụ na-enweta "ụmụ mama," bụ ndị na-etinye ndụ ha nile n'aka nne ha ma chọọ ịgba ha ume. Ma ndị nne nke onye nwe ya, ndị inyom aka ike n'ozuzu ha, na-egbochi àgwà ha nile n'ime ụmụ ha, na-agbalị ịzụlite nwa ha n'ụzọ ha chọrọ, ma ha adịghị aṅa ntị na nkà na ọchịchọ ya. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ndị nne na-achọkarị ihe kachasị mma maka ụmụaka, mana ọ na-agbanwe. Iji mee ka mmekọrịta dị mma ma dị mma na nwa nwoke site na nwa ọhụrụ ọ dị mkpa ịmụta ụkpụrụ ndị bụ isi nke ga - enyere aka ghara igbochi nwoke na ya, kama ịzụlite ezigbo mmadụ, ọ bụghịkwa ihe arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ enweghị nna, nna nna, nwanne nna maọbụ ezigbo enyi nke ezinụlọ nwoke kwesịrị iji oge dị ukwuu soro ya. Eyen ga-ahụ n'ihu ya ihe dị mma nke o nwere ike nhata. N'ụzọ dị mwute, ọbụnadị na ezinụlọ zuru oke, ụmụ nwoke anaghị enwecha agụmakwụkwọ nwoke, ebe ọ bụ na nna na-arụ ọrụ, nwatakịrị ahụ na nne nne ma ọ bụ mama ya. Nlekọta anya nke nwanyi na-egbochi oke nwoke n'ime ya. Enweghị ike ikwere nke a. Ya mere, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ka nwa ahụ tinyekwuo oge na nna ya ma ọ bụ papa ya. Ihe kachasị mkpa bụ na onye ikwu ahụ bụ n'ezie onye nwere ike ma kwesị ịdị ka ya.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ enweghị ohere isoro ndị okenye kwurịta okwu, ka ya na ụmụ nwoke ndị ọgbọ ya nọkwuo oge. Ọ dịkwa mma maka ụmụ nwoke iji gụọ akwụkwọ ma na-ekiri ihe nkiri, ebe ndị isi akụkọ bụ ezigbo mmadụ. Naanị enyeghị nwa ya nwoke dịgasị iche iche nke ndị isi na ndị isi. Ya na nwa ya nwoke ka nma ile ihe nkiri mmere anya, ebe ndi mmadu maara ihe, ike, n'ozuzu ha, ndi na-agbachitere. Ma fim ahụ, ebe ọtụtụ ime ihe ike dị mma ịghara igosi. A sị ka e kwuwe, mgbe nwatakịrị na-eto eto, nwatakịrị ahụ nwere ike ịgbaghasị ihe oyiyi nke dike na onye na-eme ihe ọjọọ.
Ejidela nwa ahụ "site na uwe"
Mgbe nwatakịrị ahụ tolitere, mama m kwesịrị ịmụta ịhapụ nwa ya. Ebumnuche nke nwa na-eto eto ka e si eme ya ka o wee mata oke ịhụnanya nke nne dika ibu. Ọ bụrụ na nne ahụ hụrụ nwata n'anya nke ukwuu, ọ na-esiri ya ike ịkpọtụrụ ụmụ agbọghọ ahụ ma bụrụ ndị enyi ya, ebe ọ bụ na ya onwe ya n'amaghị na nne na-arịgo mgbe niile na ndụ ya. Ya mere, ọ bụrụ n'oge ị bụ nwata, ị na-eche nchegbu nile maka ya na nna na nne ya, ị ga-eji nwayọ gosi nwatakịrị na nne bụ nwanyị, ọ bụ nwa okorobịa, n'ihi ya, ọ ga-enyere nne ya aka ma kwanyere ya ùgwù, nke ọma, mama, n'aka nke ya, ga-enye nwa ahụ ohere ịnọọrọ onwe ya na ọrụ maka omume ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị hụ na nwa ahụ hiere ụzọ, ọ dịghị mkpa ka ị na-edozi ya mgbe niile, ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ adịghị njọ. Ọ bụ nwoke, mmadụ ga-enwerịrị ike idozi ihe ndị ọ mejọrọ ma ghara ịtụ egwu ihe ọ ga-eme. Ya mere, n'agbanyeghị ihe ị na-adịghị amasị nwa gị, gbalịa ka ị ghara ịgabiga ókè, ọ bụghị ịghọ akụkụ nke mmekọrịta ya na ndị ọzọ ma ghara ịmanye ya ịhọrọ n'etiti nne na enyi nwanyị ma ọ bụ nne na ndị enyi. Cheta na ụmụ okorobịa ndị nne na elezi anya na-eto eto ma na-atụ egwu, enweghi ike iwulite mmekọrịta dị mma ma sonyere ọha mmadụ.
Ndụmọdụ onye ọkà mmụta sayensị na-enye ndị nne na nna nwere obere oge maka ụmụaka
Kedu ka esi kọwaa ụmụaka ihe mere nnụnụ ji efe
Ọmụmụ mmụta uche nke ụmụ na-erubeghị otu afọ
Egwuregwu na ịsa maka ụmụaka malite na otu afọ ma ọ bụ abụọ
Nwa na-atụ egwu ịgwa ndị na-ege ntị okwu
Ihe isi ike nke ọnwa mbụ nke ndụ nwatakịrị ahụ
Risotto na eggplant
Draniki na mushrooms
Kedu ihe dị mfe ịhapụ nwa okorobịa?
Akụrụngwa a na-emepụta na mbọ
Nyefee na anụ ezi
Duck na apụl - licha mkpịsị aka gị
Ụdị ochie n'ime ime
Masks maka ntutu isi n'ime ụlọ
Esi mee ka ụlọ ahụ dị ọcha?
Gịnị mere nrọ banyere ịsa efere?
Otu esi eme ka mmekọrịta gị na ịhụnanya mbụ
Gini mere nwa m ji enwe obi uto mgbe o gbusiri?
Ivan Okhlobystin kwuru banyere abamuru nke "ịkụ"
Ihe ederede maka kichin: iwu nke oke ma mee ya n'onwe gị
Ụmụ nwoke na nwoke na-ele mmekọahụ anya, ịhụnanya na alụmdi na nwunye
Ksenia Sobchak mere Bilan na Pugachev, vidiyo
Nri eghe na ọkụkọ